Barcelona Oo Wada-hadallo Qarsoodi Ah La Yeelatay Arsene Wenger Si Uu Ugu Beddelo Quique Setien - Miyuu Ogolaaday Inuu Noqdo Macallinka Barca? - Gool24.Net
Barcelona Oo Wada-hadallo Qarsoodi Ah La Yeelatay Arsene Wenger Si Uu Ugu Beddelo Quique Setien – Miyuu Ogolaaday Inuu Noqdo Macallinka Barca?
Tababarihii hore ee Arsenal ee Arsene Wenger ayaa iska diiday fursad uu ka helay Barcelona oo wada-hadallo la yeelatay si uu ugu noqdo macallinka beddelaya Quique Setien oo la filayo in shaqada laga caydhiyo marka uu dhamaado tartanka Champions League.
Arsene Wenger oo ay da’diisu tahay 70 jir ayaa la ogaaday inay wada-hadallo dhex mareen kooxda reer Catalonia oo ka codsatay inuu dib ugu soo laabto shaqada tababarenimada, isla markaana uu kooxdan hoggaamiyo marka ay shaqada ka caydhiyaan Setien.
Tababarahan reer France oo muddo 22 sannadood ah oo uu laylinayay Arsenal soo gabogabeeyey sannadkii 2018, intii ka dambaysayna aan wax shaqo ah qabanin, ayaa muddadii uu dibedda ka ahaa garoomada waxa soo gaadhay dalabyo badan oo uga yimid naadiyada ugu waaweyn Yurub.
Barcelona ayaa dalabkii ugu dambeeyey miiskiisa soo saartay dhowaan, laakiin isaga ayaa markanna diiday inuu duulimaad ku noqdo shaqada tababare Quique Setien oo ay kooxdiisu go’aan ka gaadhay mustaqbalkiisa, shandaddiisuna sii xidh-xidhan tahay.
Warbaahinta waddanka Spain ayaa kashifay qorshaha Barcelona oo markii hore la filayay in ragga ay aadka u doonaysaa yihiin ciyaartoygeedii hore ee Xavi Hernandez iyo Ronaldo Koeman.
Waraysi uu bishii November ee sannadkii hore bixiyey Arsene Wenger ayuu ku sheegay inuu jeclaan lahaa inuu kusoo laabto shaqadiisa tababarenimo ee uu muddada dheer kusoo jiray.
Barcelona ayaa Jimcaha la ciyaaraysa Bayern Munich wareegga siddeedda tartanka Champions League, waana midda ay ku xidhan tahay rajada tababarenimo ee Setien oo hore loogu sheegay in kaliya uu kooxda sii laylin karayo kulamada ka hadhsan tartanka Champions League.
Laakiin waxa isbeddeli kara go’aanka kooxda haddii ay Barcelona hore ugu sii socoto socoto Champions League oo ay ku guuleysato, iyadoo markaas uu madaxweyne Bartomeu dib uga laaban karo shaqo ka caydhinta.
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona ayaa suuqa ugu jirta tababarihii beddeli lahaa Quique Setien oo beddelay Ernesto Valverde oo bishii December dhamaadkeedii la eryey.